Forum serasera malagasy Fa toy izao Jesosy rehefa m(amp)ivavaka - Dinika forum.serasera.org
Fa toy izao Jesosy rehefa m(amp)ivavaka
Fitohizan'ny hafatra : Fa toy izao Jesosy rehefa m(amp)ivavaka
rhaj0 - 23/08/2017 16:09
Ao @ Lioka hono atao fitaratra..
Any @ "lohasaha mangina" ary "mitokatokana irery" hono i Jesosy rahefa mba mivavaka
Lioka 4:42 Raha vao naraina ny andro, dia lasa nankany amin'ny toerana mangingina anankiray izy.
Lioka 5:16 izy kosa nefa amin'izany dia mihataka mankany an'efitra ka mivavaka ao.
Lioka 9:28 ... niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka.
Dia tany @ Sinagoga koa hono izy rahefa mba mampivavaka
Lioka 4:44 Dia nitory teny tao amin'ny sinagogan'i Galilea manontolo izy.
endriny - 23/08/2017 17:43
Ary ilay vavaka nampianariny?
rhaj0 - 23/08/2017 19:34
Dia mbola ao @ Lioka ihany eee..
Hoan'ny Katolika izany dia:
Lioka 11:2 Ary hoy izy taminy: Raha mivavaka hianareo, manaova hoe: Ray ô, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.
3 Omeo anay anio ny hanina ilainay isan'andro.
4 Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza avelanao ho resin'ny fitaoman-dratsy izahay.
9 Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita; mandondòna, dia hovohana.
Toa izao kosa ny an'ny Protestanta:
Lioka 11:2 Ary hoy Izy taminy: Raha mivavaka hianareo, dia ataovy hoe: Ray ô,hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.
3 Omeo anay isan-andro izay hanina sahaza ho anay.
4 Ary mamelà ny helokay; fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy.
9 Ary hoy Izaho aminareo: Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dôndôny, dia hovohana hianareo.
Marihina tsara fa an'ny Katolika dia:
- "hanina ilainay isan'andro", "nanao ratsy", "fitaoman-dratsy".
Ho an'ny Protestanta indray dia:
- "hanina sahaza ho anay", "meloka", "fakam-panahy".
Raha ny fahatakarako an,ireo roa ireo, dia TENA SAMY HAFA BE ilay fantsy ee.. Asa iza no "namilambilana" ny Fampianaran'i Jesosy/Jesoa..
Fa dia raiso izay mampetimety ny baolinanao.
rhaj0 - 24/08/2017 15:49
Raha atao fiki-maty ilay teny malaza hoe, "izay voasoratra (anaty Baiboly) dia voasoratra", dia izao izany:
Rahefa misakafo iny ianao, ka tafakatra ambony latabatra ny whisky (alcool 45degree) sy ny hena matavy (cholesterol) izay may (cancerigene), dia raha arahinao ny vavaka nampianarin'ny Tompo fotsiny io, dia izao izany: raha nihinana tokoany moa izany ianao, dia satria TSY nobitsihiny dia nosakanan'i Jesoa na i Jesosy, dia izao izany:
hozy Jesoa @ Katolika tena ILAINAO tokoany ireo alcool/cholesterol/cancerigene ireo fa hano. Nangataka (nivavaka) ianao dia namena.
hozy Jesosy @ Protestanta tena SAHAZA ANAO tokoany ireo alcool/cholesterol/cancerigene ireo fa hano. Nangataka (nivavaka) ianao dia namena.
rhaj0 - 24/08/2017 16:09
Io ambony io izany: mitovy ve ny ILAINAO sy ny SAHAZA ANAO?
Raha ny fahatakarako azy, ilay "sahaza anao" dia toatoa ny hoe, "ilainao", fa koa, toatoa ny hoe, "mendrika anao".
Dia mitohy ihany. Dia rehefa ao @ fiaraha-monina ao koa izany ianao, dia rehefa mivavaka iny, dia milaza an'i Jesoa na Jesosy fa mba "mamela" ny mpiara-belona aminao, fa saingy izao no apetrakao mazava, raha tsy hoe dia pli-vava fotsiny no natonao rahefa manao ity vavaka nampianarin'ny Tompo ianao
hozy ny Katolika @ Jesoa mamela izay rehetra NANAO RATSY taminay zahay.
hozy ny Protestanta @ Jesosy mamela izay rehetra MELOKA taminay zahay.
Dia mitovy koa ve ny NANAO RATSY sy ny MELOKA ?
Raha ny fahatakarako azy, ilay "meloka" dia toatoa ny hoe, "nanao ratsy", fa koa, toatoa ny hoe, "voamarina" fa tena nanao izany izy (coupable amim-pomba ofisialy).
Raha ireo roa ireo izao, tena tsy aleo ve ampazahoana ny sakafo SAHAZA ANAO sy ny mamela ny MELOKA??
Raha ny fahazoako azy, ny dika-teny Protestanta no nataon'i Andrianaivoravelona tany @ 1800s tany, ary ny dika-teny Katolika no maoderina.
Mahavariana ahy hoe, fa dia naninona loatra ilay dika-teny Katolika no lasa toa io:
- izay ILAINAO dia peho, na dia TSY SAHAZA ANAO azany izany
- izay NANAO RATSY dia amelao, na dia TSY MELOKA (amim-pomba ofisialy) azany izy
rhaj0 - 24/08/2017 17:31
Dia f'angaha tsy loza fa dia mbola mitohy ihany..
Rahefa manao ity vavaka nampianarin'ny Tompo ity izany, ka mieritreritra ny tenabe, dia izao no apetrakao mazava, toatoa ny hoe:
hozy ny Katolika @ Jesoa tena mangataka (mivavaka) mba tsy voan'ny FITAOMAN-DRATSY ianao izany
hozy ny Protestanta @ Jesosy tena mangataka (mivavaka) mba tsy voan'ny FAKAM-PANAHY ianao izany.
Dia mitovy ve ny FITAOMAN-DRATSY sy ny FAKAM-PANAHY??
Ny fahazoako azy, ilay "fakam-panahy" dia ianao ihany no erany, fa ilay "fitaoman-dratsy", dia ianao no erany, fa koa, misy hafa, mety naman-dratsy io, mety i Devoly, no manitikitika anao.
Ohatra hoe, raha tenda-toaka ianao, dia raha "fakam-panahinao" anao irery ao, dia OK hono izany @ Katolika.
Fa raha toa kosa "notaomin'ilay naman-dratsy" hisotro toaka ianao, dia .. lozanao.
RAha tsy hoe. ampianao tsingolo-batita io, dia akapokao ho ny Devoly foana no "mitaona" anao @ ratsy, ka dia i Devoly no nambosibosika ilay namanao.
Fa dia miampy foana ny mahavariana eee... fa dia naninona loatra ilay dika-teny Katolika no lasa toa io:
- ny FITAOMAN-DRATSY nataon'ny hafa no loza, fa raha FAKAM-PANAHINAO irery ao, dia OK.
- izay ILAINAO dia peho, na dia TSY SAHAZA ANAO azany izany.
- izay NANAO RATSY dia amelao, na dia TSY MELOKA (amim-pomba ofisialy) azany izy.
rhaj0 - 30/08/2017 18:20
Dia toatoa ny ahoana hono i Jesosy Jesoa rehefa mivavaka..
hozy ny Katolika, mitantara Jesoa Matio 26:39 Ary nony nandroso kely izy, dia nihohoka tamin'ny tany ka nivavaka...
hozy ny Protestanta, mitantara Jesosy Matio 26:39 Ary nony nandroso kely izy, dia niankohoka ka nivavaka...
Ny Jesoa Katolika izany nihohoka tamin'ny tany, tarataratro toatoa ny Moslimo.
Fa ny Jesosy Protestanta kosa dia niankohoka fotsiny, tarataratro toatoa ballerine nahavita pirouette.
Sa "mihohoka @ tany" koa no dikan'izany hoe "miankohoka"??
Fa dia io izany ee.. Matio no "vavolombelona", fa dia asa ho'a,
- i Matio ve no nampita hafatra samy hafa ho an'ny Protestanta sy Katolika,
- sa ny Protestanta sy Katolika no "mamilavilana" ny revin'i Jesosy Jesoa eee????
rhaj0 - 31/08/2017 17:00
Ity koa mbola misy variante ny fataon'i Jesoa Jesosy rahefa mba mivavaka Izy
hozy ny Katolika, mitantara Jesoa Lioka 22:41 Dia nihataka tamin'izy ireo tokony ho tra-toraka izy ka nandohalika, dia nivavaka.
hozy ny Protestanta, mitantara Jesosy Lioka 22:41 Ary Izy nihataka taminy tokony ho indray mitora-bato, dia nandohalika ka nivavaka.
Mba mitovy indray ny resaky ny "vavolombelona" eto, fa
- niala nihataka t@ ireo namany na mpianany Izy,
- dia nandohalika izany i Jesoa Jesosy rehefa mivavaka.
Fa tena MIHATAKA alavitra @ namany Izy rehefa manao an'io an. Dia asa loatra hoe fa maninona. Raha "mpampianatra" moderna anefa izao, dia ilay "leader par l'exemple" no fatao. Fa izay moa ny taloha, ka dia io iaraha-mihaino ny "vavolombelona" Matio io.
Fa eo ambanimbany, dia vao mainka pire
hozy ny Katolika, mitantara Jesoa Lioka 22:44 Dia voan'ny fiadiana aina izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa. Ary nanjary toy ny rà ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany.
hozy ny Protestanta, mitantara Jesosy Lioka 22:44 Ary fadiranovana Izy, ka dia nivavaka mafimafy kokoa; ary ny dininy dia tahaka ny ra nipotrapotraka tamin'ny tany.
Tena tsy haiko imaziner-na... Dia hotry ny izaho ho'a no Irainizeloza rahefa hoe, "mikimpy mafy toa constipé" i Kristy sy ny Kristiana rahefa mivavaka. Raha tsy izany ve tsy ho tsembo-doza tahak'io.
Sa... nahazo orgasme ve Izy io nivavaka io, dia lasa tsemboka be io?? Izany hoe, ni-se matsirobe izany Izy tao?? (satria Izy irery no tany an...).
Tsihaitsihay an... satria ao @ Lioka ho'a, dia hozy ny "vavolombelona" hoe, lasa any @ "toerana mangingina", na any an'"efitra", na any "antendrombohitra" mihintsy Izy ..
andeha vakansy kely indray fa lavabe ny faran'ny herinandronay aty.. @ manaraka manao bebe
Miharena - 24/10/2017 09:15
Mbola manohy ilay faniratsirana ihany Rhaj0 dia rehefa atao hoe keliloha dia mikadrandringana toy ireny olona nisy namono ireny.
Fa aleo aloha hazavaina ilay Fivavahana nataon'i Jesoa ireo.
Nofo Jesoa ary olombelona feno no tonga teto an-tany hampianatra sy hampifandray antsika amin'Andriamanitra RAY, Rain'ny olombelona rehetra.
Arak'izany dia niaina tanteraka ny maha-olombelona IZY ary anisan'izany ny tahotra sy ny fahatsapana fahadiranovana. Ahoana tokoa moa no hahafantarana izany raha tsy tsapa sy iainana ary ahoana no fitsaboana izany raha tsy fantatra tsara?
Izay no maha-Mpamonjy AZY, mahalala arivo isan-jato ny manjo ny olona ory tokony havotana.
Nanantena izao Mpampnjy mamirapiratra izao ny Jiosy tamin'ny fotoan'androny dia nanda an'i Jesoa. tsy heveriny hoe olombelona mora vonoina kely toa an'io ny Mesia. Nefa noporofoiNY fa Mpandresy IZY noho ny fitsanganaNY sy niakaraNY tany an-danitra ary izao mbola miasa hatramin'izao izao IZY.
Mba mitokana mivavaka Rhaj0 dia mba tsidihiny ao ianao a!
I Saoly lasa Paoly anie anisan'ny manenjika AZY fa dia nomeny hafatra dia niova fo e!
Ny eto Dago aza dahalo roalahy taizan'i Belzebota no nantsoiNY hampahamenatra ny manam-tsaina koa!
rhaj0 - 24/10/2017 14:47
I Miharena koa ve "tsembon-doza" toa an'i Jesosy io rehefa mivavaka??